ဘုရားသခင်အားဒုတိယအခွင့်အရေးပေးသည် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-04 > ဘုရားသခင်ကဒုတိယအခွင့်အရေးကိုပေးပါသလား။
ဒါဟာ မင်းရဲ့ ပုံမှန် အက်ရှင်ဇာတ်ကားပဲ- ဗုံးမပေါက်ကွဲခင် 10 စက္ကန့်ပဲ ကျန်တော့တယ်၊ ဗုံးကို ချေမှုန်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် သူရဲကောင်းလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဟီးရိုး၏မျက်နှာမှ ချွေးများစီးကျလာပြီး တင်းမာသောရဲအရာရှိများနှင့် အခြားသရုပ်ဆောင်များသည် အသက်ရှူမဝ။ ဘယ်ကြိုးဖြတ်ရမှာလဲ အနီရောင်? အဝါရောင်? နောက်ထပ်လေးစက္ကန့်။ အနီရောင်! နောက်ထပ် နှစ်စက္ကန့်။ မဟုတ်ဘူး အဝါရောင်။ လျှပ်တပြက်! မှန်အောင်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ရုပ်ရှင်ထဲက ဟီးရိုးက ညာဘက်ကြိုးကို အမြဲဖြတ်ပေမယ့် ဘဝက ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဝိုင်ယာကြိုးကို မှားခုတ်မိပြီး ရုတ်တရက် အားလုံးပျောက်သွားသလို ခံစားဖူးပါသလား။ သခင်ယေရှု၏အသက်တာကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဒုတိယအခွင့်အရေးများပေးသည်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူပြီး သူ၏အသက်တာနှင့် စရိုက်လက္ခဏာသည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ စရိုက်လက္ခဏာကို အလွန်ရှင်းလင်းစွာ ထင်ဟပ်နေပါသည်။ တပည့်ပေတရုသည် ယေရှုထံသို့လာ၍ သခင်ဘုရားကို မေးသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှားသော ငါ့ညီကို ဘယ်နှစ်ခါလွှတ်ရမည်နည်း။ ခုနစ်ကြိမ် လုံလောက်ပါသလား။ သခင်ယေရှုက၊ ငါဆိုသည်ကား၊ ခုနစ်ကြိမ်မက၊ အကြိမ် ခုနစ်ဆယ် ခုနစ်ဆယ်ဟု မိန့်တော်မူသည် (မဿဲ ၁၈း၂၁-၂၂)။
ဒီစကားပြောဆိုမှုရဲ့အရေးပါမှုကိုနားလည်ဖို့အဲဒီအချိန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအနည်းငယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကမကောင်းဆိုးဝါးသုံးကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘာသာရေးဆရာတွေကခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်သင်မလိုအပ်ပါ။ ပေတရုကသူသည်အလွန်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြောင်း၊ လူတစ် ဦး ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရန်သူ၏အဖြေကိုယေရှုအထင်ကြီးစေခဲ့သည်။ သို့သော်ယေရှုသည်၎င်းကိုသဘောမကျသော်လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းသဘောတရားကိုသူနားမလည်ကြောင်းပေတရုအားနားလည်စေခဲ့သည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာရေတွက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်သင့်ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်လို့ပါ။ အကြိမ်ပေါင်း ၇၀ ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ခွင့်လွှတ်သင့်တယ်လို့ယေရှုပြောတဲ့အခါသူကအကြိမ် ၄၉၀ မဟုတ်ဘဲအကြွင်းမဲ့ခွင့်လွှတ်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ သခင်ယေရှု၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သခင်ယေရှုအပြင်ဘုရား၏စစ်မှန်သောအကျင့်စာရိတ္တနှင့်စစ်မှန်သောနှလုံးသားဖြစ်သည်။ ဖြစ်တည်မှုသာမကသာမကအကျင့်စာရိတ္တသည်လည်းဘုရားသခင်၏သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြစ်မှားခဲ့ဖူးကြောင်း စစ်မှန်စွာယုံကြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်တော့ပါ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်တော့ဟု ခံစားရသည်။ သခင်ယေရှု၏ အသက်နှင့် အကျင့်တို့ကို တစ်ဖန် အကျယ်တဝင့် ပြောသည်- ယေရှု၏ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ပေတရုသည် သူ့ကို သုံးကြိမ် လူသိရှင်ကြား ငြင်းဆိုခဲ့သည် (မဿဲ ၂၊6,3456၊ 69-75) သို့တိုင် ယေရှုသည် သူ့အား လက်လှမ်းမှီပြီး ခွင့်လွှတ်ပြီး ချစ်တော်မူ၏။ ဤအတွေ့အကြုံသည် ပေတရု၏ဘဝနယ်ပယ်များစွာတွင် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ သူသည် ယေရှု၏သစ္စာအရှိဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံးနောက်လိုက်များနှင့် သူ၏အသင်းတော်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောခွင့်လွှတ်ခြင်း၏ နောက်ထပ်ထူးခြားသောဥပမာတစ်ခုမှာ ယေရှုသည် ပြင်းထန်သောဝေဒနာဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခဲ့သော်လည်း၊ အသေခံခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို လှောင်ပြောင်သရော်သည့်တိုင် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကို ခဏလောက် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ပေးဆောင်နိုင်သော မယုံနိုင်စရာ၊ အမှန်တကယ်မြင့်မြတ်သော မေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများနှင့် မယုံကြည်သူများ၏ ဘုံနားလည်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်သည် သင့်နောက်တွင် မရှိပါ။ မင်းအမှားလုပ်မိရင် မင်းကိုဖမ်းဖို့စောင့်နေရုံနဲ့ ကောင်းကင်မှာထိုင်လို့ မရနိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်က ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့က လူသားတွေဖြစ်နေကြတာ။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်မဟုတ်ဘဲ သူ့အပိုင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော မတရားမှုများ၏ အစုအဝေးကို စောင့်ရှောက်သူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘဲ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင့်တကြောင်း ဖော်ပြသည့် သမ္မာကျမ်းစာတွင် နမူနာများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ငါတို့ကို မည်မျှမကြာခဏ ကတိပေးတော်မူသနည်း၊ ငါသည် သင်တို့ကို မစွန့်၊ မစွန့်ပစ်။ (ဟေဗြဲ ၁၃း၅)။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်တောင့်တသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မပျက်စီးသင့်ဘဲ၊ လူအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ တကယ်ကို အံ့သြစရာကောင်းတာက ဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုက ဒီလိုကြင်နာတဲ့စကားတွေပြောရုံသာမက ယေရှုရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက် သူတို့ပြောသမျှကိုလည်း အသက်ရှင်စေခဲ့တာပါပဲ။ ယခု ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးပါသလား။
အဖြေကတော့မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲခွင့်လွှတ်သည်။ သင်၏အပြစ်များ၊ အမှားအယွင်းများနှင့်ဒဏ်ရာများအကြောင်းဘုရားသခင်အားပုံမှန်ပြောပါ။ ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုသင်ထင်သည့်နေရာတွင်မဟုတ်ဘဲသူ့ကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏အမှားများကိုမရေတွက်ပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်လက်ချစ်မြတ်နိုးမည်၊ ခွင့်လွှတ်မည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါစေကျွန်ုပ်တို့အနားတွင်ရှိနေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးသည့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာရန် - နေ့စဉ်ပင်လျှင်မလွယ်ကူသော်လည်းယေရှုကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Johannes Maree ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်